Hahazo fanohanana ireo mpiasan’ny fahasalamana: tsy nitombo ny isan’ireo tratran’ny Covid-19 | NewsMada
“Vaovao mahafaly”, hoy ny filoham-pirenena. Fantatra tamin’ireo fitiliana natao omaly fa tsy nisy ny tranga vaovao eo amin’ireo olona mitondra ny valanaretina Covid-19. Ankoatra izay, hahazo fanohanana amin’ny alalan’ny “prime de risque” avokoa ireo mpiasan’ny fahasalamana rehetra.
Nambaran’ny filoha fa tena ao anatin’ny fotoana sarotra ary ady ny atrehin’ny firenena. Misy ny maherifo hanavotra ny firenena amin’ny sedra. « Homena tosika sy ampaherezina ary tohanana izy ireo. Hojerena ny tambiny, « prime de risque », ho an’ireo mpiasan’ny hopitaly Anosiala sy ny hopitaly manara-penitra, ny dokotera, ny paramed, ny mpilatsaka an-tsitrapo ary ireo mpianatra ho mpitsabo. Tsy maintsy alefa ny anjaran’izy ireo… », hoy izy.
Etsy andaniny, notsiahiviny ny nambaran’ny eo anivon’ny Foibe fandrindrana ny hetsika iadiana amin’ny Covid-19 (CCO) eny Ivato fa tsy nisy trangana Coronavirus ireo olona miisa 150 natao fitiliana. « Vaovao mahafaly izany. Mijanona ho 19 ihany izany ireo mitondra ny Covid-19. Nametraka lamina matipaika isika matoa voafehintsika hatramin’izao ny valanaretina. Miankina amin’ny olom-pirenena koa anefa izany raha te hanavotra ny tenantsika isika, manavotra ny tenan’ny hafa », hoy ihany izy.
Hatao fitiliana avokoa ireo mpandeha avy any ivelany…
Ankoatra izany, nambarany fa amin’ny 4 avrily izao no ahafahana mandrefy azy io. Tapitra ny fe-potoana ka hisy ny tombana. « Aiza ho aiza ny fifehezana valanaretina? », hoy izy. Nisy mpandeha 145 tamin’ny zotra MD 051, ny 18 marsa, tsy mbola tokony hivoaka ny trano anefa izy ireo, araka ny nambarany. « Afaka 14 andro vao hita ny Coronavirus. Alohan’ny 4 avrily, hatao fitiliana avokoa ireo nandray ny sidina rehetra. 10 andro sisa ny ady atrehintsika. Mila mahay mifehy tena ary mijanona any an-trano », hoy ny filoha. Natsidiny sahady koa fa tonga izao alina izao (halina) ny fiaramanidina « cargo » hitondra ilay fitaovana fitiliana haingam-piasa ahitana valiny anatin’ny minitra vitsy. Miaraka amin’ny fitaovana samihafa. « Antsoina avokoa ny paramed sy ny mpianatra ho mpitsabo manerana ny firenena hampiasa izany fitaovana fitiliana izany », hoy ihany izy.